Caruur laga fasaxay ciidannimo - BBC Somali
Caruur laga fasaxay ciidannimo
Hay’adda caruurta u qaabilsan Qaramada Midoobay, ayaa sheegaysa in in ka badan 300 oo caruur ah laga sii daayay kooxo hubaysan oo ka jira Jamhuuriyadda Afrikada dhexe.
Tallaabadan ayaa imaanaysa maalmo kaddib, heshiis ay ku gaareen caasimada Bangui, kooxo hubaysan oo iska soo horjeeda si ay u fasaxaan caruurta ka tirsan kooxahooda.
In kabadan kummanaan ayaa la amaansiyahay in ay weli xiriir la leeyihiin kooxa badan oo ka jira dalkaasi.
Tirada caruurtan oo ah 357, ayaa laga sii daayay maanta meel u dhow magaalada Bambari, kuwaas oo qaar mid ah ay da’doodu ka yartahay 12-sano.
Caruurta ayaa ahaa kuwa ciidan laga dhigto, ilaalo, ama cunto u kerin jiray maleeshiyaad badan oo ka howlgala dalkaasi.
Qaarkood ayaa loo isticmaali jiray in loo galmoodo.
Hay’adda Unicef, ayaa sheegaysa in caruurtaasi haatan ay heleen dawayn iyo la talin dhanka maskaxda ah, marka xaaladda amni ay wanaagsanaatana lala mideyn doono eheladooda, haddii la ogaado halka ay ku sugan yihiin.
Hoggaamiyayaasha 10-kooxood oo hubaysan ayaa dhawaan ogalaaday in ay sii daayaan caruurta ka tirsan askartooda.
Waxaa la sheegayaa in caruurta ka tirsan kooxahaasi tiradooda ay ka badan tahay 10,000, sida ay sheegtay hay’adda caruurta u qaabilsan Qaramada Midoobay, kuwa hadda la fasaxay ayaa ah qeyb yar oo ka mid ah kuwa xiriirka la leh kooxaha hubaysan.